Baaroo Tumsaa Odoo du’a oolee jiraatee hin dubbatuu laata? |Simarsan – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
Baaroo Tumsaa Odoo du’a oolee jiraatee hin dubbatuu laata? |Simarsan
(OMN kan Oromooti; gareen achi keessa dhokatee namoota miidhu kun garuu Oromoo miti.) (Yaazoo Kabbabaa Irraa)
Oromoo! Balaa gaafa guyyaa 23/11/2016 narra gahe ilaalchisee hedduun keessan nafaana dhibamaa akka turtaniifi deeggrsa barbaachisu mara naaf gochuu keessaniif galanni kiyya yoomiyyuu caalaa dacha dachaan isin yaa gahu, Rabbiitti aanaa kabajamaa, ofitti aanaa jaalatamaa!
Dhimma kanaan wal qabatee yaada keessan akkan dubbisetti “ Akka fedhe yaa ta’uu dhugaan jiru yaa bahu…” jettanii jirtu. Anillee dhugaa jirtu beekus “ ilkaanifi arraba wallolan natti ta’eetan akkatti dubbadhu dhabee, kan garaa garaatti ” jechuun use. Dhugaa yoo nutty himi jettan ammoo nin hima. Garuu maayessa akka hin muufanneefi akka nah in komanne isinis itti qophaa’aa.
Asirratti namoonni waan kana dhimma lagaafi lageetin walitti qabsiisanii diigumsa fiduuf foolatan dubbiin jiru akkasii mitiitii tasgabbaa’aa jechuun fedha. Dhimmichi dhimma jibbinsa jaarmayaati malee kan sanyiifi kan lagaatin ala. Haadhaa asirratti namoonni tasuma harki isaanii waan ta’u barreessuuf hin sarmineef tokko tokko kutaa Oromiyaa adda baasuun kan abaluufi abalutu yaazoo waraane jedhanii kaa’anis ni jiru. Kunis dhara. Kanan heddu itti gammade ammoo dhimma kanarratti warra jibbaan guutameen alatti jaarmiyaan siyaasa Oromoo kaan isaanii garaagarummaa siyaasaa qabnuun alatti akka namoomaattiifi akka Oromummaatti nafaana ta’uun na wal’aanaa turuunifi gargaarsa barbaachisu mara naaf gochuun isaanii siyaasni keenya gama tokkoon dagaagaa akka jiruufi ijoolleen teenya Siyaasa hammayyaa dalaguu akka eegalte raga guddaa naaf ta’e.
Asirratti akka fakkeenya gaariitti kanan kaasufi namni bakkan kufee jalqaba dhufee nakaasuu isaa barii hoospitaalatti natti hime DHeekkoo fi waayila isaa, kan KWO deeggaru jedhamaniidha. Kun hedduu na boonse. Galata lammummaatii ol qabu. Ani gama kootis Siyaasa baranii jiru kan jedhuun mirkaneesse gaafan dhagahu. Oromoodha jedhaniit na kaasanii hospitaalatti na geessan. Garaagarummaa siyaasaa san yeroo saniif taphaan ala godhan jechuudha. Fakkeenya gaarii, jagnummaa dhugaa!
Gara dhimma kiyaatti yoo deebinu, dhugaan jirtu akkana .Wanti isaa Korma keessantu mar’ate waan ta’eef hadhaa jiru kana dhudha’uuf dirqamna. Warri waan kana narratti Raawwate miseensa garee OMN damee Kaayiroo muraasafi deeggartoota akka addaatin isaan as keessatti bobbaasaniidha jedheen fudha.. Kana yoon jedhu tarii namoonni hedduun muufachuu danda’u ta’a. Dhugaadha anis muufachaan barreessaa jira. Akkuma namni keenya hin muufanneefan wantoota armaan dura narra gahaa turan “Kan garaa garaatti” jedhee ciniinsifachaa ture. Kun baatii saddeet keessatti waan yeroo sadaffaaf narratti aggaamameedha. Maalif isaani jette? Naan jechuu maltu.
Fulbaana 2016, dursaan OMN damee kaayiroo sababa tokko malee bakka teenyee shaayii dhugnutti hookkara natti kaasuu isaa,
Fulbaana 21,2016 garumti kun albeedhaan yaalii ajjeechaa narratti aggaamuu isaa,
Kanaan walqabatee ammoo hogganaa OMN,Jawaar mahaammadiif karaa keessaa waan kana akka too’atuuf barreessefii haala isaa ibsuufis deebiinis ta’ee yaadni tokkollee itti kennamuu dhabuu,
Sadaasa 23/2016 gaafa na summeessan kana guyyaa lamaan dursuun gaafa 21/2016 naman beekufi kan natti dhiyaatu akka na ajjeesuuf deemanifi waan kanas yeroo torban tokkoo keessatti akka raawwatan naaf dhaamanii turan. Kunis isa amma raawwatan kana.
Haalli kun akkanaan odoo jiruu anillee dubbiin kun qabsoo Oromoot miidha jedhee jaallan kiyya waliin callisnee dhoksuuf mari’annus isaanumti kanaa fuula FB isaanii gadi bahanii waan sagalii sagaltama xeeban. Mootiin isaanii Jawaar akka isaan utubuufi saniifis ammoo akka baasii ramadeefii deemu dhaadachuudhan gocha kana raawwachuu isaanii,
Kana keessayis namoota yeroo jalqabaa albeen bahan keessaa akkuma jedhame san namoota lama kanafalee biyyatti kan deebise ta’uu isaa,
Waan kana hunda bira kutuun ammoo wantoota ta’an kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuun dhiifama gaafachuun odoo irra jiruu hundi isaanii duula biraa narratti hoofuun kun komii seenaa jalaallee kan isaan hin baasne yoo ta’u, ilaalcha isaanitis akka foon cululleen fuutee akka rarraatu godha.
Asirratti namoonni akka jara kanaa madaallii gocha isaani godhaniitifi lubbuu namaa baduuf jiruufi badaa jiru,keessahuu ammo ajjeechaa malaa malteen guuttame kana raawwachuun isaanii itti dhagahamuu dhabuudhan balaallii kiyyaaf arraba baasuun kun xiqqeenya malee guddina isaanii hin argisiisu. “Ni ta’a jennee harree qallee, hin ta’u jennaan harree gannee!” san nu jalaa ta’e.
Ani akka nama tokkootti wanti akkanaa kun akka hin baaneef carraaqqiin godhe guttaa ta’uu isaanii waan san hunda obese darbuu kiyyas qabsoo Oromootti gufuu akka hin taaneef jechudha malee madaan kiyya odoo nah in dhukkubin hafee miti. Amma garuu akka faranjoonni jette san “Enough is enough!” kanaan malee hin ceenu yoo ta’e gamanumatti yaa hafnu!